यी महान छोरा ! जसले आफ्नो बुवाको ९० औं ज’न्मदिन मनाउन ८५ दिनको य’स्तो क’ठिन या’त्रा गरे” – Jagaran Nepal
यी महान छोरा ! जसले आफ्नो बुवाको ९० औं ज’न्मदिन मनाउन ८५ दिनको य’स्तो क’ठिन या’त्रा गरे”
कोरोना भा इरस प्रकोप फैलिएसँगै अर्जेन्टिनाले अन्तर्राष्ट्रिय उ’डान स्थगित गर्‍यो। अर्जे’न्टिनाका नागरिक हुवान म्यानुअल बालिएस्तिरो त्यो बेला पोर्चुगलमा थिए। हुवान पोर्चुगलको सानो टापु पोर्टो सेन्टोमा बसेका थिए। उनी बसिरहेको यो ठाउँ रम’णीय थियो, त्यो बेलासम्म कोरोना पनि नपुगेको। उनी त्यहीँ लकडाउन र सामाजिक दुरी अपनाएर सुर’क्षित बस्न सक्थे।
४७ वर्षे माझी हुवानको मन मा नेन। : – ‘अब संसारै रहला कि नरहला’ भनेर आ’त्तिएका उनले परिवारबाट आफूलाई टाढा राख्न सकेनन्। त्यसमा पनि विशेष गरी आफ्ना बुवाबाट जो छिट्टै ९० वर्ष पुग्दै थिए। उनले अचम्म तरिकाबाट आफ्नो घरसम्म यात्रा गर्ने निधो गरे, इन्धन र हावाको चापबाट चल्ने आफ्नो सानो डुंगामा। मार्च मध्यदेखि सामुद्रिक यात्रा सुरू गरेका उनी ८५ दिन लगाएर आन्ध्र महासागर पारि रहेको आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल भए।
‘एक जना पनि कोरोना सं’क्रमित नदेखिएको त्यो टापुमा म काँतर बनेर एक्लै बसिरहन चाहन्न थिएँ,’ हुवान भन्छन्, ‘बरु घर फर्किन सम्भव भएसम्म जे पनि गर्न तयार थिएँ। मेरो निम्ति सबभन्दा महत्वपूर्ण भनेकै कसरी हुन्छ यो अ’निश्चित क्षण परिवारका साथमा बिताउनु थियो।’को’रोना भा’इरस महा’मारीले यति बेला पृथ्वीका हरेक कुनाको जीवन दुष्कर बनाएको छ। संसारकै अर्थतन्त्र ध्व स्त पारेको छ। भूराजनीतिक त नाव ब ढाएको छ। अधि कांश विदेश भ्र मण रद्द गराइदिएको छ।
अझ घर फर्कन चाहने, परिवार तथा आ फन्तको सामिप्य पाउन ला लायित हुनेदेखि लि एर चिनेजानेका र नातेदारको मला मी जान नपाउनेले उ ठाएका दुःखक ष्टका अ नगिन्ती कहा नीले यो सिं गो युगको विषादमय चित्र खिच्न थालिसकेको छ। सागरमा डुं गाका भरमा ख’तरनाक यात्रा था ल्नु अघि हुवानलाई उनका साथीले सम्झा उने कोशिस गरेका थिए। पोर्चुगलका अधिकारीहरूले पनि उनी एकपटक मुलुकको सिमाना नाघेर गएपछि कुनै सं’कटमा परेमा फेरि फर्किने अनुमति पाउन नसक्ने चे’ताव नी दिएका थिए। तर, हुवान आफ्नो जिद्दीबाट टसमस भएनन्।
‘मैले एकतर्फी यात्राको अ ठोट लिइसकेको थिएँ, फर्कने कुनै स म्भावनै थिएन,’ उनी भन्छन्। हुवानको फकीर जस्तो जीवन शैलीबाट उनका आ फन्त अभ्यस्त थिए। उनलाई सम्झा उनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने ढुक्कै थियो। ‘अघिल्ला लगभग पचास दिन ऊ कुन कुना पुगेको थियो, यो थाहा पाउनु हाम्रो वशको कुरा थिएन,’ हुवानका बुवा कार्लोस अल्बेर्तो बालिएस्तिरो भन्छन्, ‘तर, जस्तोसुकै ठाउँ पुगे पनि सकुशलै फर्किनेछ भन्नेमा कुनै शंका थिएन।’
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि २९ फिटे सानो डुंगा चढेर आन्ध्र महासागर पार गर्नु भनेको असा ध्यै चुनौतीपूर्ण हो। अझ, यात्रा पछिका तीन साता संसारै म’हा’मा’रीको जा लमा तीव्र फ स्दै गएका बेला झनै प्रतिकूल हुन स क्थ्यो। यीबाहेक यात्रामा व्याव हारिक अड्चन पनि थिए। उनले डुंगामा तयारी माछा, फलफूल र भात जोहो गरेका थिए। कम हुँदै गएको खाना र इन्धन भर्न उनी अप्रिल १२ का दिन केप भर्दे पुगेका थिए। त्यहाँका अधिकारीले किनारमा डुंगा अड्याउनै दिएनन्। त्यो सानो टापु राष्ट्रबाट हुवान केही खानेकुरा र इन्धन जोहो गर्न चा हन्थे, त्यो अनुमति पनि पाएनन्।
आफूसँग बचेखुचेका खानेकुराले नै यात्रा पूरा गर्न सक्छु भन्ने आ त्मवि श्वास उनले ब टुले र फेरि प श्चिमतर्फ डुंगा घुमाए। उनले सोचेभन्दा थोरै इ न्धन भ इदिएको भए त्यो सा नो डुं गाले पूर्ण रूपमा स मुद्रमा बग्ने हावाहुरीकै भर पर्नुप र्थ्यो। समुद्रमा लामो समय बिताउनु हुवानका निम्ति नौलो थिएन। तै पनि जस्तै अनुभवी नाविकलाई पनि यति विशाल सागरमा आइपर्ने तमाम परिस्थितिसँग एक्लै ड ट्ने सा हस जुटाउनु धेरै मु श्किल थियो, त्यो पनि सानो डुंगामा एक्लै।
समुद्रमा आफू एक्लै भए पनि कसैले निरन्तर पछ्या एझैं लागेको थियो रे। एउटा ठूलो जहाजको बत्तीले आफ्नो सानो डुंगा पछ्याउँदै आएको भान हुँदो रहेछ। जति भाग्यो, उति नजिक आएजस्तो लाग्ने। ‘मैले सकेसम्म चाँडो डुंगा चलाउने कोशिस गरेँ,’ त्यो भयावह अवस्थाको वर्णन गर्दै हुवान भन्छन्, ‘धेरै नै नजिक आइपुगे म त्यतातिर गो ली नै चला इदिन्छु भन्ने मनस्थितिमा समेत पुगिसकेको थिएँ।’
समुद्रमा डुंगा चलाउने कला भने हुवानले परिवारबाटै विरासतमा पाएका हुन्। तीन वर्षको उमेरदेखि नै बुवा क्याप्टेन रहेको माछा मा र्ने जहाज च ढ्दै धेरै देश यात्रा गर्ने अवसर पाएका थिए उनले। त्यसैगरी १८ वर्ष लाग्नेबित्तिकै दक्षिणी अर्जेन्टिनामा एउटा मा छा मा र्ने डुंगामै रो जगारी पाए। पेन्टागोनियाको समुद्री तटतिर उनलाई एक जना अत्यन्तै धुरन्धर माझीले जीवन शैली नै बदलिने सुझाव दिए- ‘जाऊ, संसार घुम।’
ती व्यक्तिले दिएको दिव्य सल्लाह हुवानले आफूमा समाहित गरे। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय उनले जहाजमा तैरिएरै बिताए। भेनेजुएला, श्रीलंका, बाली, हवाइ, कोष्टारिका, ब्राजिल, अलास्कादेखि लिएर स्पेनसम्म उनका बिसौनी हुन्थे। संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका लागि उनले समुद्री कछुवा र ह्वेल माछामा ‘ट्याग’ लगाइदिने काम गरे भने गर्मीमा धनीमानी युरोपेलीका स-साना जहाज हाँकिदिने काम पनि गर्छन्।
हुवान आफ्ना बुवासँगको भेटपछि कुरा गर्दै। ९० वर्ष लागेका उनका बुवा पहिले माछा मार्ने जहाजका क्याप्टेन थिए। हुवान ३ वर्षका छँदैदेखि बुवाले उनलाई जहाजमा लैजान्थे। उनले ‘स्कुआ’ नामको ‘ओल्सन २९’ डुंगा सन् २०१७ मा किनेका हुन्। यसमै चढेर संसार घुम्ने उनको चाहना थियो। यस्तो अवस्थामा जगतै सं’कट’मा गुज्रियो। यो डुंगाले एउटा महासागरै पार गर्ने काम जसोतसो फत्ते गर्‍यो।
‘म डराएको थिइनँ। बरु के होला, कसो होला भन्ने अन्यौल भने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीमा चारैतिर संकट झुलिरहेका बेला यस्तो यात्रा अत्यन्त अनौठो कदम थियो।’ सामुद्रिक यात्रा आफैंमा एकान्त हुन्छ। त्यसमा पनि यो लामो यात्रा हुवानका लागि झनै बिरानो। उनी प्रत्येक रात आधा घन्टाजति रेडियो खोलेर कोरोना भाइरसले संसारभर के-के तमासा मच्चाइरहेको छ भनेर बुझ्न छुटाउँथेनन्। ‘बेला बे लामा त मेरो अ’न्तिम यात्रा नै यही हुन्छ भन्ने पनि पर्थ्यो,’ उनी भन्छन्। खुला समुद्रका बीचमा पनि हुवानले आफूलाई क्वारेन्टिनमा परेजस्तै महशुस गर्थे।
अब दुनियाँ कतातिर जाला भन्ने अनिश्चितताले जन्माउने अनेक तर्कनाको बन्दी बन्थे। उनलाई कहिलेकाहीँ असाध्यै छ’ट’पटी हुन्थ्यो। एक दिन यस्तै उकुसमुकुस म’च्चिएपछि उनले रक्सीको बोतल खोले। मदिराको नशाले उनको वि’चलन झनै बढायो। शरीरका नसा तन्किँदै गए। उनले त्यो बेला ईश्वर सम्झे। प्रार्थना गरे। ‘यस्तो बेला ईश्वरप्रतिको आस्थाले सम्हालिन सजिलो बनाइदिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले आफैंलाई पर्गेल्ने मौका पाएँ। यो यात्राले मभित्र धेरै कोमलता भरिदियो।’
हप्तौं लामो यात्रामा कुनै बेला उनलाई असाध्यै कमजोर महशुस पनि हुन्थ्यो। त्यति बेला उनी जीवजन्तु हेरेर चित्त बुझाउँथे। उनलाई यसले साइतका लागि सगुन जुराइदिएजस्तो भान पार्थ्यो। डल्फिनको एउटा झुण्डसँगको यात्राले उनको मनलाई सान्त्वना मिलेको थियो। ती डल्फिन उनको डुंगा छेउछेउ हुँदै, घरि यता र घरि उता गर्दै दुई हजार माइलसम्म साथै यात्रा गरेका थिए।
‘उनीहरू कतै जान्थे र पछि फेरि टुप्लुक्क आइपुग्थे,’ उनले भने, ‘एकदिन चाहिँ सदाका लागि छुट्टिएर अलप भए।’ बेस्सरी रक्सी पिएको एकदिन उनले एउटा विशाल चरा नजिकैबाट उड्दै गएको देखे। छेउमै आइपुगेपछि त्यो त स्कुआ चरा पो रहेछ, जसको नामबाटै उनको डुंगाको नामाकरण भएको थियो। हुवानले आफ्नो डुंगाको नाम स्कुआ राखेका छन् जो एक समुद्री चराको नाम हो।
उनको यात्रा क्रममा उनले स्कुआ चरा देखेका पनि थिए। तस्बिरः द न्यूयोर्क टाइम्स ‘मलाई त्यो चराले छेउबाट उड्दै ‘नछोड, अघि बढिराख्’ भनिरहेजस्तै लाग्यो,’ उनले भने। डब्बामा राखेका खानेकुरा खाँदाखाँदा दिक्क लागेपछि एकदिन हुवानले बल्छी निकाले। माही-माही जातका टन्नै माछा पनि देखे। तर, उत्तिनैखेर उनको इच्छा म र्‍यो। ‘मलाई माछा मार्नै मनलागेन। माछा होइन, मानिसलाई नै पो मार्दैछु जस्तो भान पर्‍यो,’ उनले सुनाए,
‘त्यत्रो वर्ष माछा मा’रेरै जीविकोपार्जन चलाएको म जस्तो मान्छेलाई त्यो घ’टनापछि अब माछा मार्नै अप्ठ्यारो लाग्न थालेको छ।’ त्यो घट नापछि उनले डब्बाकै टुना माछा खाएर काम चलाए। अमेरिकी महादेशनजिकै पुगेका बेला ब्राजिलको भिटोरियातर्फबाट आएको लगभग एक सय ५० माइल प्रतिघन्टा रफ्तारको हुरीले झन्डै उनको डुंगा ध्वस्त बनाएको थियो। यो घ टनाले उनलाई पूर्वयोजना नभए पनि भिटोरियामा बिसाउन बा ध्य बनाइदियो।
भिटोरियामा दस दिन बिताएकै कारण उनले ७५ दिनमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको यो यात्रा ८५ दिन लामो बन्यो। त्यहाँ बसेकै बेला आफ्ना भाइले अर्जेन्टिनाका पत्रकारलाई उक्त सा मुद्रिक यात्राबारे जानकारी दिएको खबर हुवानले पाए। लकडाउनका कारण घरैभित्रै खुम्चिएका मानिसलाई यो समाचारले उ’त्तेजित पारेको थियो। अन्तिम दस दिनको यात्रा सुरू गर्नुअघि साथीहरूको चाहना अनुसार हुवानले आफ्नो यात्राको रेकर्ड राख्न इन्स्टाग्राम खोलेका थिए।
जुन १७ मा जब उनी आन्ध्र महासागर पारि आफ्नो थातथलो मार देल प्लाता पुगे, त्यहाँ उनको भव्य स्वागत भयो। ‘म त्यही समुद्र किनार पुगेको थिएँ जहाँ मेरा बुवाको माछा मा’र्ने डुंगा अडेका हुन्थे। जहाँ मेरा बुवाले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो। जहाँ मैले डुंगा चलाउन सिकेको र त्योसँग जोडिएका तमाम कलाको उत्पत्ति भएको थियो। र त्यति नै बेला एउटा साहसिक यात्रा अ न्त्य पनि भइरहेको थियो,’ उनले भने।
त्यो किनारकै घा टमा एक स्वास्थ्यकर्मीले उनको कोरोना परीक्षण गरे। ७२ घन्टापछि रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आयो। त्यसपछि बल्ल उनले अर्जे न्टिनाको मा टोमा पाइ ला टेक्ने अनुमति पाए। उनी ढिलो पुगेकाले बुवाको ९० औं जन्मदिनको समारोह त छुट्यो। तर यो वर्षको ‘फादर्स डे’ हुवानले बुवासँगै मनाउन पाए। ‘मैले जे अनुभव गरेँ, त्यो अहिले सपनाजस्तै लाग्छ,’ हुवान भन्छन्, ‘तर, बाँकी जीवन पनि यसैगरी पानीमा डुंगा खियाएरै बिताउने मभित्र बलियो संकल्प छ।’ (द न्यूयोर्क टाइम्सका लागि ड्यानियल पोलिटीले लेखेको स्टोरीको भावानुवाद)